လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ တားဆီးကာကွယ်ရေး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ ယူကရိန်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက် - Global Campaign for Peace Education
ဧပြီလ 6, 2022 သတင်းနှင့်အထူးများ 1
ဓာတ်ပုံ Pexels မှတဆင့် Victor Katikov.
အရေးယူရန် တောင်းဆိုပါ - ယူကရိန်းစစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ပါ။
ဒီစစ်ပွဲကြီးပြီးရင် အားလုံးရဲ့အကျိုးအတွက်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပညာရေးက အရေးကြီးပါတယ်။ လူတွေဟာ စစ်ပွဲရဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကို ဘယ်လိုကျော်လွှားပြီး သူတို့ရဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ သင်ယူရပါလိမ့်မယ်။
(ပြန်လည်တင်ပို့သည် - လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ ကာကွယ်ရေးအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု။ ဧပြီ ၅၊ ၂၀၂၂)
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်အဖွဲ့များအဖြစ် ဖော်ပြထားသော ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (PEWG) ၏ Global Partnership for the Global Partnership (GPPAC) အဖွဲ့ဝင်များသည် ပူတင်နှင့် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအစိုးရအား ယူကရိန်းစစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ဒီစစ်ပွဲမှာ အောင်နိုင်သူ မရှိနိုင်ပါဘူး။ သန်းပေါင်းများစွာသော ဒုက္ခသည်များနှင့် Internally Displaced People (IDP) ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ပျက်သုဉ်းမှု၊ သေဆုံးမှုနှင့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများသည် တရားမျှတမှု မရှိနိုင်ပါ။ ဒုက္ခသည်အများစုမှာ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များဖြစ်ပြီး ယခုအခါတွင် ကြောက်ရွံ့မှု၊ စိတ်ဆင်းရဲမှုနှင့် စိတ်ဒဏ်ရာများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည်။ စစ်ပွဲသည် မည်သည့်ပဋိပက္ခ၏အဖြေမှမဟုတ်သည့်အပြင် လူသား၊ ရုပ်ဝတ္ထုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများတွင် ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော အကျိုးဆက်များ အမြဲရှိနေပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်စာတမ်းတွင်ပါရှိသော ၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အဓိကတာဝန်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီအား ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ "နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းခြင်း" (အပိုဒ် ၂၄)။ လက်ရှိအခြေအနေသည် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေပြီး နိုင်ငံအများအပြားရှိ သန်းပေါင်းများစွာသော ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။
အထူးသဖြင့် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအစိုးရအပေါ် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိနေသေးသော နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အားလုံးကို ရန်လိုမှုများအဆုံးသတ်ရန်၊ အထိခိုက်ဆုံးသော ယူကရိန်းပြည်သူလူထု၏အကျိုးအတွက်၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထား၍လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ အလုံးစုံလုံခြုံရေး ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် ရရှိနိုင်သော သံတမန်နည်းလမ်းအားလုံးကို အသုံးပြုရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် ဒုက္ခသည်များနှင့် IDP များအတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်များနှင့် စိတ်-လူမှုရေး အထောက်အပံ့များ ပံ့ပိုးပေးရန် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအေဂျင်စီများအား ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ ကျောင်းများရှိ ကလေးများအတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လူမှုရေး ပံ့ပိုးမှု.
ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် လုပ်ဆောင်နေသော ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာပေးဆရာများအနေဖြင့် ကျောင်းများတွင် မကြာခဏ၊ လက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက်မှုများ၏ နောက်ဆက်တွဲတွင် လှုံ့ဆော်မှုနှင့် အားဖြည့်ပေးသည့် အမုန်းတရားမျိုးစေ့များကို ကျွန်ုပ်တို့ သိပါသည်။ ဒါကို ကုစားဖို့ မျိုးဆက်တွေ ကြာနိုင်တယ်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် လုပ်ဆောင်နေသော ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာပေးဆရာများအနေဖြင့် ကျောင်းများတွင် မကြာခဏ၊ လက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက်မှုများ၏ နောက်ဆက်တွဲတွင် လှုံ့ဆော်မှုနှင့် အားဖြည့်ပေးသည့် အမုန်းတရားမျိုးစေ့များကို ကျွန်ုပ်တို့ သိပါသည်။ ဒါကို ကုစားဖို့ မျိုးဆက်တွေ ကြာနိုင်တယ်။ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့် ကျောင်းများမှ ခေါင်းဆောင်များအား တစ်စုံတစ်ရာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။ ဤပဋိပက္ခကို သတင်းမှားနှင့် ဝါဒဖြန့် လှုံ့ဆော်မှု။ စစ်မှန်သောပညာတတ်များအနေနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအား အသိဥာဏ်ရှိ ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်သော တွေးခေါ်ရှင်များဖြစ်လာစေရန်နှင့် ကွဲပြားခြင်းနှင့် အမုန်းတရားများကို စိန်ခေါ်နိုင်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးကို မျှဝေခံစားနိုင်စေရန်အတွက် ပြင်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ယခုနှင့်အနာဂတ်၌တည်၏။
ဒီစစ်ပွဲကြီးပြီးရင် အားလုံးရဲ့အကျိုးနဲ့ ပြီးသွားရမယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပညာရေးက အရေးကြီးပါတယ်။. လူတွေဟာ စစ်ပွဲရဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကို ဘယ်လိုကျော်လွှားပြီး သူတို့ရဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ သင်ယူရပါလိမ့်မယ်။
အကြမ်းဖက်မှုမရှိဘဲ ပဋိပက္ခကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားနှင့် စိတ်ကို အမြစ်တွယ်ခြင်းဖြင့် အစပြုကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် သရုပ်ပြပါသည်။ နိုင်ငံရေး သို့မဟုတ် နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် စစ်အင်အားကို မှီခိုအားထားမှုသည် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းနှင့် ပဋိပက္ခများကို ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မြင်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အကြမ်းမဖက်သော အခြားနည်းလမ်းများအတွက် ပညာပေးသင်ကြားရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ သန္နိဋ္ဌာန်သည် ပြင်းထန်လာသောကြောင့် လူသားအားလုံးသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို လုံခြုံပြီး ပြည့်ဝသောဘဝဖြင့် နေထိုင်နိုင်စေပါသည်။
Gary Shaw ဥက္ကဌ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ GPPAC (သြစတေးလျ၊ ပစိဖိတ်ဒေသ)၊
Jennifer Batton၊ ပူးတွဲဥက္ကဌ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ GPPAC (အမေရိကန်၊ မြောက်အမေရိက); ကထိက၊ Cleveland State တက္ကသိုလ်
Jorge Baxter၊ အဖွဲ့ဝင်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ GPPAC (ကိုလံဘီယာ၊ တောင်အမေရိက); University of the Andes မှ တွဲဖက်ပါမောက္ခ
Loreta N. Castro၊ အဖွဲ့ဝင်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ GPPAC (ဖိလစ်ပိုင်၊ အရှေ့တောင်အာရှ); ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးစင်တာ၊ Miriam ကောလိပ်နှင့် Pax Christi ဖိလစ်ပိုင်
Gail Reyes Galang၊ အဖွဲ့ဝင်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ GPPAC (ဖိလစ်ပိုင်၊ အရှေ့တောင်အာရှ); သဘာပတိ၊ မိသားစုလေ့လာရေးအစီအစဉ်၊ တွဲဖက်ဒါရိုက်တာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးစင်တာ၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ စိတ်ပညာဌာန၊ ဥက္ကဌ၊ Maryknoll/Miriam College Alumni Association
Tony Jenkins၊ အဖွဲ့ဝင်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ GPPAC (USA၊ မြောက်အမေရိက); ညှိနှိုင်းရေးမှူး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအင်စတီကျု ဒါရိုက်တာ၊ ကထိက၊ Georgetown တက္ကသိုလ်
Ketei Matsui၊ အဖွဲ့ဝင်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ GPPAC (ဂျပန်၊ အရှေ့မြောက် အာရှ)၊ ပါမောက္ခ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုလေ့လာရေးဌာန၊ Seisen တက္ကသိုလ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေးဆိုင်ရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု၊ ဂျပန်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဘာသာရေး၊ ဂျပန်ကော်မတီ၊ လစ်ဘရယ်ဘာသာရေး အမျိုးသမီးများအတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့။
Jose F. Mejia၊ အဖွဲ့ဝင်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ GPPAC (ကိုလံဘီယာ၊ တောင်အမေရိက); အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Aulas en Paz
Kazuya Asakawa၊ အဖွဲ့ဝင်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ GPPAC (ဂျပန်၊ အရှေ့မြောက် အာရှ)၊ သုတေသနအဖွဲ့၊ PRIME၊ နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသနဌာန၊ Meiji Gakuin တက္ကသိုလ်
Gohar Markosyan၊ အဖွဲ့ဝင်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ GPPAC (အာမေးနီးယား)၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အမျိုးသမီးများ၊ NGO
Jae Young Lee၊ အဖွဲ့ဝင်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ GPPAC (တောင်ကိုရီးယား၊ အရှေ့မြောက် အာရှ)၊ ဒါရိုက်တာ၊ Korea Peacebuilding Institute & Korea Association for Restorative Justice
Edita Zovko၊ အဖွဲ့ဝင်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ GPPAC (ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား၊ ဘော်လကန်); Nansen Dialogue Center Mostar
ဤထုတ်ပြန်ချက်နှင့် မေတ္တာရပ်ခံချက်သည် ကမ္ဘာ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းများစွာ၏ အခြေအနေတွင် ယူကရိန်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး လူသားမိသားစု၏ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကို သာတူညီမျှတန်ဖိုးထားကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုံလူသားဖြစ်မှုကို ရှုထောင့်မှ ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
ယူကရိန်း ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမှု၏ အမှုဆောင် အတွင်းရေးမှူး Yurii Sheliazhenko သည် အကြောက်တရားနှင့် အမုန်းတရားများကို ကျော်လွှားရန်၊ အကြမ်းမဖက်သော ဖြေရှင်းနည်းများကို လက်ခံကာ ယူကရိန်းတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ယဉ်ကျေးမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ပံ့ပိုးပေးရန် ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေး၏ အရေးပါမှုကို လင်းလက်တောက်ပစေသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း ပြဿနာနှင့် တပ်များနှင့် နယ်နိမိတ်မရှိသော အနာဂတ်ကမ္ဘာတွင် အကြမ်းမဖက်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်မှု ရှုထောင့်က ရုရှား-ယူကရိန်းနှင့် အရှေ့-အနောက် ပဋိပက္ခများကို ခြိမ်းခြောက်နေသော အရှိန်အဟုန် လျော့ပါးသွားစေရန်လည်း ဆန်းစစ်သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
“ယူကရိန်းစစ်ပွဲက ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုသာမက လူသားတွေရဲ့ရှင်သန်မှုကိုပါ ခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်နေသော နိုင်ငံတိုင်း စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ခြင်းဖြင့် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် သံခင်းတမန်ခင်းဖြင့် သံခင်းတမန်ခင်း ထားရှိကြရန် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအား စစ်ပွဲမပြီးဆုံးမီ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများဖြင့် တောင်းဆိုထားသည်။ - စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖြေရှင်းချက်ကွန်ရက် [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
ဧပြီလ 11, 2022 မှာ 9: 49 နံနက်
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများကို တားဆီးရန် အကြံပြုချက်တစ်ခု…လက်နက်၊ လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ကုန်သွယ်မှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ… သာယာဝပြောရေးကို တားဆီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။တရားမျှတမှုမရှိသော စက်များဖြင့် သတ်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် တရားမျှတမှုမရှိ၍ အပြစ်ကင်းသော လူ့အသွေး။